घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू स्पेनिश फुटबल खेलाडीहरू मार्कोस लोरेन्टे बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
हाम्रो मार्कोस लोरेन्टेको जीवनी तपाईंलाई उसको बाल्यकाल कहानी, प्रारम्भिक जीवन, परिवार, आमा बुबा, प्रेमिका / पत्नी हुनु, जीवनशैली, नेट वर्थ र व्यक्तिगत जीवनको बारे तथ्य बताउँछ।
संक्षेपमा हामी स्प्यानिश पेशेवर फुटबलरको इतिहास चित्रण गर्दछौं। Lifebogger आफ्नो शुरुआती दिन देखि शुरू हुन्छ, जब उनी प्रसिद्ध भयो। तपाइँलाई मार्कोस ललोरेन्टेको बायोको आकर्षक प्रकृतिको स्वाद दिनको लागि, यहाँ उनको जीवनको चित्रण सारांश छ।
मार्कोस लोरेन्टे प्रारम्भिक जीवन र उठो।
हो, सबैलाई थाहा छ ऊ त्यो फुटबलर हो जसको दुई ठूलो लक्ष्य 2019/2020 च्याम्पियन्स लिगको राउन्ड -१ 16 को अतिरिक्त समयमा लिभरपूल निहत्था भए। यद्यपि मार्कोस लोरेन्टेको जीवनी केवल केहिले पढेका छन् जुन अत्यन्त चाखलाग्दो छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
मार्कोस लोरेन्टे बाल्यकाल कहानी:
जीवनी सुरु गर्नेहरूको लागि, उहाँ उपनाम लिनुहुन्छ "मार्को“। मार्कोस लोरेन्टे मोरेनोको जन्म जनवरी १ 30 1995 January को th० औं दिनमा उनको आमा, मारिया आंगेला मोरेनो, मा भएको थियो।एक सेवानिवृत्त बास्केटबलर) र बुबा पाको ललोरेन्टे, (एक सेवानिवृत्त फुटबलर) माद्रिद, स्पेन मा।
खेलकुद परिवार जराका धेरै फुटबलरहरू जस्तै मार्कोस लोरेन्टेको बाल्यकाल जीवन रमाईलो थियो। उनी बुझेका थिए आफ्नो परिवारका गतिविधिहरू खास गरी वंशानुगत रूपमा चलाइएको थियो।फुटबल जीन'जो सानो केटाको रूपमा उसको नसिकामा बग्यो।
सत्य कुरा के हो भने, मार्कोस ल्लोरेन्टेका परिवारका सदस्यहरू (विस्तारित) दुबै मातृ र पितृ पक्ष सबै रियल मैड्रिडका साथ सबै फुटबलरहरू थिए। सानो मार्कोस रियल म्याड्रिड रेकर्ड सम्बन्धी उनका महान महान् अंकलहरूको ज्ञान पाएर हुर्किसकेका थिए जुन अझै भाँचिएको छैन। तसर्थ, यो केवल बुबा र छोरा जीन काम भन्दा बढी थियो, तपाईं आफ्नो बुवा एक पूर्व फुटबलर थियो।
त्यस समय सानो मार्कोस3बर्षको उमेरका थिए, उनको बुवा पाको ललोरेन्टे (तल चित्रित) उसको बुटहरू ह्या hang्गो गर्ने निर्णय गरे। प्रत्येक फुटबलिdबुबा (पाको सहित) को लागि, यो रिटायरमेन्टसँग व्यवहार गर्न धेरै पीडादायी थियो। पाको कहिल्यै आफ्नो परिवारको रूखमा फुटबल खेल्ने अन्तिम हुने व्यक्ति हुन चाहँदैनथ्यो। रिटायर्ड फुटबलरले उनको छोरा मार्कोससँग घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित गरे, परिवारको सपनाहरुमा बाँच्नको लागि उनलाई पोशाकको आशामा।
पाको लोरेन्टेले कलिलो उमेरमा आफ्नो छोराको साथ बलियो सम्बन्ध स्थापित गरे। उनी केवल आफ्नो छोरालाई परिवारको सपनाहरुमा बाँच्नको लागि चाहन्थे।
मार्सोस लेलरेनs पारिवारिक पृष्ठभूमि र प्रारम्भिक जीवन:
एक खेल परिवारबाट आइसकेका जसका आमाबुबा (बुवा), काका र हजुरबा हजुरआमाले रियल र एटलेटिको म्याड्रिडका लागि धेरै पैसा कमाए, यो निष्कर्षमा निष्पक्ष छ कि लोरेन्टे एक धनी / उच्च-वर्ग परिवार पृष्ठभूमिबाट हुन सक्छ।
मार्कोस एउटा सानो बच्चा हो जसमा सहभागी हुने उनको प्रारम्भिक जीवनको सपना थियो “म्याड्रिडिस्टासको राजवंश " जहाँ उनका बुवा, काका, हजुरबा हजुरआमा हुनुहुन्थ्यो।
मार्कोस लोरेन्टेको शिक्षा:
परिवारका सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिईयो जसले उदाहरणका साथ अगुवाइ गरे, मार्कोसले रियल मैड्रिड एकेडेमीसँग फुटबल शिक्षा प्राप्त गर्ने पहिलो आशा राखेका थिए। तपाईको बुबाले त्यहाँ त्यस समयमा खेल्नु भएको थियो, उनलाई थाँहा थियो कि उनले थप कडा परिश्रम गर्नु पर्ने हुन्छ जसबाट पारिवारिक मैत्री क्लबले उनलाई पुर्पक्षको लागि बोलाउँदछ।
त्यस बेला, माक्रिड्सले लस ब्लान्कोस किट्स दिनका दिन लगाउन रुचाउँथे किनभने उसले म्याड्रिडको सडकमा आफ्नो शिल्पलाई बढावा दिन्थ्यो। स्थिर संकल्प र आफ्नो काका, हजुरबुबा र बुबाको पदचिन्ह अनुसरण गर्न को लागी कहिल्यै एक पारित कल्पना को रूप मा देखा परेन।
मार्कोस लोरेन्टे बाल्यकाल फोटो- फुटबलको साथ शुरुआती वर्षहरू।
पाको ललोरेन्टे फुटबलबाट अवकाशपछि (1998 मा)4राम्रो वर्ष फुटबलको अभिनय मा आफ्नो छोरा शिक्षा सिकाए। जीवितको लागि फुटबल खेल्ने उसको केटाको चाहना बुझेर सेवानिवृत्त फुटबलरले आफ्नो आकांक्षालाई समर्थन गर्न आफूले सकेजति गरे।
मार्कोस लोरेन्टेको प्रारम्भिक क्यारियर जीवन:
रियाल म्याड्रिड एकेडेमीमा सामेल हुन संघर्ष कहिलेकाँही ठूलो दबाबको साथ आउँदछ र धेरै कम युवाहरू यसलाई प्रबन्ध गर्न सक्षम छन्, जबकि अरूहरू त्यस्तो गर्दैनन्। २००२ सम्ममा मार्कोस एकेडेमीको साथ जीवन सुरु गर्न तयार भइसकेका थिए। दुःखको कुरा, यो रियल मैड्रिड थिएन जुन उसले पहिले आशा गरेको थियो।
उनीहरूको छोराको रियल म्याड्रिड एकेडेमी क्यारियरको सपना मध्ययतामा मिल्नुको सट्टा, मार्कोस लोरेन्टेका अभिभावकहरूले उनलाई सामेल हुन अनुमति दिने निर्णय गरे लास रोजस, परिवार गृहनगर मा एक स्थानीय क्लब। तल अवलोकन गरिए अनुसार, लास रोजासमा मार्कोस ल्लोरेन्टेको परिवार म्याड्रिडको लागि २० मिनेटको ड्राईभमा थिए।
मार्कोस लोरेन्टे लास रोजास सीएफको लागि बसे जहाँ उनले football बर्षसम्म फुटबल खेले।
मार्कोसले लस रोजा क्लब डी फेटबोलमा आफ्नो क्यारियरको जग बसाए। धन्यबाद उच्च अकादमीहरुमा उत्कृष्टता प्राप्त गर्ने तीव्र चाहना, मार्कोसले अन्य एकेडेमीहरुका लागि खेल्दै गए; नुवा रोसेआ (२०० to देखि २००)) र रायो माजादहोंडा (२०० to देखि २००))
यद्यपि उनले ती साना प्रतिष्ठानहरूका लागि खेले पनि युवाले अझै पनि आफ्नो रियल म्याड्रिड एकेडेमी सपना साकार पार्न दृढ संकल्प गरिसकेका छन। सत्य यो हो कि उनले कहिल्यै हार मानेनन् र जवानले अझै पनि रियल मैड्रिडमा सहभागी हुने आशा राखेका थिए।
मार्कोस लोरेन्टेका आमा बुबा र परिवारका सदस्यहरूको आनन्द (विशेष गरी उसको बुवा) त्यतिखेर कुनै सीमाना थाहा थिएन जुन उनीहरूको आफ्नै आफ्नै मात्र रियल म्याड्रिडले चिनिनन तर उनीहरूको एकेडेमी परीक्षण पार गरे।
मार्कोस लोरेन्ते रियल म्याड्रिड एकेडेमीमा प्रारम्भिक वर्षहरूमा एक आक्रामक मा विकसित भयो whiz बच्चा। उनी एक किसिमको जवान मानिस थिए जसलाई आसीसिभ बल कन्ट्रोल र बिरोध विगतका विपक्षीहरूको नक्कलले आशिष दियो। मार्कोस रियल मैड्रिड एकेडेमीको स्थानमा उत्रिए जुन उनले सबै प्रकारका विरोधीहरूको बिरुद्धमा सफलता हासिल गरेका थिए। उनी पनि उनको युवा पक्षको कप्तान जस्तो देखिन्थ्यो।
रियल म्याड्रिड एकेडेमीमा युवा मार्कोस।
मार्कोस लोरेन्टेको जीवनी- फेम टू फेम स्टोरी:
रियाल म्याड्रिड जुवेनिल टीमको साथ धेरै प्रभावित गरे पछि, मार्कोस रियल म्याड्रिड बी द्वारा पदोन्नती भए Zinedine Zidane जो त्यस समयमा, रियल माद्रिदको रिजर्भ टीमको तत्कालीन कोच थिए।
पढ्नुहोस् सर्जियो रेगुइलन बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
वर्ष २०१ 2017 मा मिडफिल्डरले रियाल म्याड्रिड वरिष्ठ टीमका खेलाडीहरूसँग काँधमा मलहम गरेको देखे Mariano, Isco, मोडरिक र Kroos। त्यो २०१-2017-२०१ season सिजन, मार्कोस लोरेन्टेले क्लबलाई युईएफए च्याम्पियन लिग, सुपर कप र फिफा क्लब विश्व कप जित्न मद्दत पुर्‍यायो जहाँ उनले म्यान अफ द म्याच अवार्ड जितेका थिए।
मार्कोस ललोरेन्टे रियल मैड्रिडमा उठे।
२० जुन २०१ 20 मा, मिडफिल्डरले महसुस गरे कि उनले पर्याप्त सफलता हासिल गरिसकेका छन र राम्रो खेल समयको आवश्यकताले स्थानीय प्रतिद्वन्द्वी एटलिटिको माद्रिदमा सामेल हुने निर्णय गरे। धेरै प्रश्नहरु उनको निर्णय, यो उनको परिवार फुटबल मूल्यहरु बाट विचलन को एक रूप को रूप मा संदर्भित।
मार्कोस लोरेन्टेको बायोग्राफी लेख्ने समयमा मिडफिल्डरलाई भनिन्छ उसको गुणस्तर र विशेष दिनको लागि धन्यवाद देखि एक बृद्धि गर्न ताकत। विशेष दिनको कुरा गर्दै, पीrecisely ११ मार्च २०२० मा, मार्कोसले नयाँ उपनाम पायो "लिभरपूल स्लेयर“। यो उपनाम लाई धन्यवाद दुई गोलहरू जसले लिभरपुल फ्यानहरूको हृदय तोड्यो। मार्कोस लोरेन्टेले २०१/2018/२०१० च्याम्पियन लिग राउन्ड अफ १ 2019 बाहिर २०१/2019/२०१। यूरोपीयन च्याम्पियन पठाउँदै।
त्यो दिनलाई सम्झेर लिभरपूल स्लेयरले २०१ silence/२०१ European मा युरोपियन चैम्पियन्स मौन बनायो।
निस्सन्देह, मार्कोस लोरेन्टेका आमा बुबा आफ्ना छोरालाई उनीहरूको परिवारको फुटबल विरासतमा देखेर गर्व गर्दछन्। हाम्रो आफ्नै आँखाको अगाडि, हामी अर्को केटालाई विश्व स्तरीय प्रतिभामा फस्दै गरेको देख्न सक्छौं। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
मार्कोस लोरेन्टेको प्रेमिका ?:
लोरेन्टेको प्रसिद्धिमा देखिएको छ प्रशंसकहरु इन्टरनेट को लागी थाहा छ कि यदि उनी एक प्रेमिका छ कि, वा यदि उनी वास्तव मा विवाहित छ जो सम्मिलित, जो एक श्रीमती छ। सत्य यो हो, सफल फुटबलरको पछाडि, त्यहाँ एक ग्लैमरस प्रेमिका छ जो नामबाट जान्छ प्याट्रिसिया Noarbe.
मार्कोस ललोरेन्टेको गर्लफ्रेंड- प्याट्रिसिया नोर्बेलाई भेट्नुहोस्।
प्याट्रसिया Noarbe को हो? - मार्कोस लोरेन्टेको प्रेमिका:
उनी अक्सर "सौन्दर्य र दिमाग "। प्याट्रिसिया एक फिटनेस गुरु र बहु ​​डिग्री होल्डर हो। आश्चर्यजनक स्पेनिश सुन्दरता कानून र व्यवसाय प्रशासन र व्यवस्थापन मा एक डबल डिग्री हो।
प्याट्रिसिया दुबै बाहिर र अनलाइन ग्राहकहरूलाई फिटनेस प्रशिक्षण प्रदान गर्नमा माहिर छन्। उनी "को मालिक हुन्www.paddyness.es“, फिटनेस प्रशिक्षण र खाद्य सल्लाह प्रदान गर्ने एक वेबसाइट, विशेष गरी एथलेटिक्सको लागि।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… पैट्रसिया नोआर्ब नै मार्कोस लोरेन्टेको म्यान युनाइटेडमा ट्रान्सफर नभएको एक मात्र कारण हो। यस अनुसार DailyStar, मार्कोस आफ्नो प्रेमिकाले भविष्यको बारेमा कुनै निर्णय गर्नु अघि उनको विश्वविद्यालयको अध्ययन पूरा गरेको चाहन्थे।
प्याट्रिसिया Noarbe एक निःस्वार्थ व्यक्ति हो जसले उनको मान्छेलाई भावनात्मक सहयोग प्रदान बाहेक अरू केही गर्दैन। तल चित्रित, उनी देखियो उनको प्रेमीले एकलौटी लिभरपूललाई ​​तल ल्याएको क्षणको उत्सव मनाउँदै।
पढ्नुहोस् Juan Mata Childhood Story Plus Untold Biography Facts
पैट्रसिया नौंर्बे उनको प्रेमीले लिभरपुलमा ल्याएको क्षणको खुशी मनाउँदै।
गर्मी को लागी एक जोडी को मनपर्ने getaways मा स्पेनिश टापु र Ibiza को पानी हो। दुबै आफैंलाई माया गरिरहेको तरिकाबाट निर्णय गर्दा यो सम्भवतः "विवाह”उनीहरूको अर्को औपचारिक कदम हुनसक्दछ।
मार्कोस लोरेन्टे आफ्नो प्रेमिका र पत्नीको साथ क्वालिटी समय खर्च गर्दछन्।
मार्कोस लोरेन्टेको व्यक्तिगत जीवन:
फुटबल प्रेमीहरू, हामी बाकीहरू जस्तै, तिनीहरूका घरपालुवा जनावरहरूलाई मन पराउनुहोस् र मार्कोस लोरेन्टे एक अपवाद होइन। यहाँसम्म कि त्यहाँ एउटा भनाइ छ कि आधुनिक खेलमा कुनै वफादारी छोडियो, यसले मार्कोस र उसको कुकुर (KD) बीचको साझेदारीलाई निश्चित रूपमा ध्यान दिँदैन।
मार्कोस लोरेन्टेका कुकुरहरू भेट्नुहोस्।
सारांशमा, मार्कोस लोरेन्टे प्रगतिशील, मूल, स्वतन्त्र र कुकुर-मैत्री छन्। ऊ सीमितता, टुटेका प्रतिज्ञाहरू, एक्लो र सुस्त वा बोरिंग अवस्थाहरू मनपर्दैन।
मार्कोस लोरेन्टेको जीवन शैली:
करीव १२ करोड युरोको कुल मूल्य र market० करोड युरो भन्दा बढीको बजार मूल्य संग, यो मार्कस कुनै श doubt्का बिना, करोडपति हो भन्न ठीक छ।
जे होस्, जब यो पैसाको कुरा आउँछ, यस मार्कोससँग खर्च र बचतको बीचमा सन्तुलन कायम गर्ने प्रतिभा छ। खर्चको कुरा गर्दै, एक कुरा निश्चितको लागि उसको (उसको कार)। यहाँ मार्कोस यस मनमोहक अडीको पाels्गलको पछाडि चित्रण गरिएको छ, उसको मनपर्ने कार।
मार्कोस ललोरेन्टे कार- यस्तो देखिन्छ कि उनी अडीका फ्यान हुन्।
मार्कोस लोरेन्टेको पारिवारिक जीवन:
परिवार राजवंशको बारेमा कुरा गर्दा, यो तपाईंलाई जानकारी गराउन महत्त्वपूर्ण छ कि कुलमा, उनका आफन्तहरूले क्लबको इतिहासमा भाग लिदै रियल म्याड्रिडका लागि ११०० भन्दा बढी खेलहरू खेलेका थिए। यस सेक्सनमा, हामी तपाइँलाई मार्कोस ललोरेन्टेका आमा बुबा र उनका परिवारका बाँकी सदस्यहरूको बारेमा थप जानकारी ल्याउने छौं।
मार्कोस लोरेन्टेको बुबाको बारेमा:
फ्रान्सिस्को 'पाको' लोरेन्टे गेन्टोको जन्म मे १ 21 .1965 को २१ औं दिनमा स्पेनको भालाडोलिड शहरमा भएको थियो। ऊ एक सेवानिवृत्त फुटबलर हो जसले रियल र एटलेटिको म्याड्रिड दुबैको लागि दायाँ वि win्गरको रूपमा खेल्दछ। एटलेटिको म्याड्रिडमा उनको समयमा पाको लोरेन्टेको फोटो तल छ जहाँ उनका छोरा (लेखनको समयमा) आफ्नो फुटबल खेल्छ।
एटलेटिको र रियल म्याड्रिडका साथ खेल खेल्ने समयमा मार्कोस ललोरेन्टेका बुबा - पाको ललोरेन्टेसँग भेट्नुहोस्।
बारेमा मार्सोस लेलरेनआमाको आमा:
उनका पति र छोराले जस्तै उनले पनि खेलकुदमा आफ्नै अध्याय लेखेका छन्। लोरेन्टेकी आमा मारिया एन्जेलाले आफ्नो प्राइमको समयमा बास्केटबल खेलीन्। यो एक स्पोर्टी महिला थिइन जसले लोरेन्टे नामको प्रतिष्ठामा बाँचेकी थिई।
बारेमा थप मार्सोस लेलरेनकाका:
त्यहाँ पाको गेन्टोको उत्कृष्टता वर्णन गर्न पर्याप्त शब्दहरू छैनन् जो आफ्नो बुबाको पक्षबाट मार्कोस लोरेन्टेका ठूला काका हुन्। अक्सर "लेबल गरिएकोरेकर्ड कप संग्रहको साथ मानिस", पाको सबै समयको सर्वश्रेष्ठ बायाँ-विgers्गरहरू मध्ये एकको रूपमा पनि परिचित छ र साथै रियल म्याड्रिडको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो म्याड्रिडिस्टा मध्ये एक हो।.
मार्कोस लोरेन्टेको काका, पाको गेन्टो, एक फुटबल लीजेंड भेट्नुहोस्।
२१ अक्टोबर १ 21 1933 मा जन्मिएको, रियल म्याड्रिड स्ट्राइकरसँग क्लबको हर समय उपस्थिति नेता र छ युरोपेली कप जित्ने एक मात्र मानिस भएको रेकर्ड छ।
पाको गेन्टो क्लबको पौराणिक टीमले भरिएको थियो Di Stéfano, Kopa, Puskas र अन्य उत्कृष्ट खिलाडिहरु। रियल म्याड्रिडका साथ १ 18 सत्रहरूमा उनले १२ ला लिगा उपाधि र छ वटा यूरोपियन कप जितेका थिए (ती मध्ये पाँच लगातार छ)। यो मितिमा हो, एक अटुट रेकर्ड। तल उसको खेल दिनहरू बखत पकोको छोटो क्लिप छ।
मार्कोस ल्लोरेन्टेका अन्य सुपर अंकलहरू (उनको बुवाआमा भाइहरू) निम्न समावेश गर्नुहोस्;
(1) जुलियो गेन्टो (फुटबलर): उनी पनि फुटबलर (डिफेन्डर) थिए जो एकपटक रियल म्याड्रिडका लागि खेल्थे। ऊ आफ्नो दाइ पाको भन्दा छ वर्ष कान्छो थियो (माथि चित्रमा)।
(2) एन्टोनियो गेन्टो (फुटबलर): is जेन्टो र जुलियोको कान्छो भाई। उनी पनि आफ्नो समयमा स्ट्राइकर थिए।
ती तीन जना जेन्टो भाइहरूको एक बहिनी मारिया एन्टोनिया गेन्टो थियो। तपाईंलाई थाँहा थियो?… चार छोरा मध्ये जो रियल मैड्रिड संग जोडिएको छ, ती मध्ये एक मार्कोस लोरेन्टेको बुवा हो। मारियाका चार छोराहरू पनि समावेश छन्; जो ल्लोरेन्टे, टोन ललोरेन्टे, पाको ललोरेन्टे (मार्कोस लोरेन्टेका बुबा) र जुलियो लोरेन्टे।
पढ्नुहोस् Pedro Rodriguez बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
बारेमा थप मार्सोस लेलरेनग्रान्ड्याड:
रिमन ग्रोसो मार्कोस ल्लोरेन्टेको मातृदादा हुन् जो कुनै समय रियल मैड्रिडका लागि फुटबलर थिए। तपाईंलाई थाँहा थियो?... रेमनले रियल म्याड्रिडको नौं shirt शर्ट अल्फ्रेडो डि स्टीफानोबाट प्राप्त गरे र गेन्टोको साथमा १9.1966 युरोपियन कप जित्न सफल भए।
ग्रोसोका पाँच जना बच्चा र तिनीहरूमध्ये एक, तिनकी छोरी थियो मारिया एन्जेला, जसले पछि पाको ललोरेन्टे (मार्कोस बाबा) सँग विवाह गरे।
मार्कोस लोरेन्टेको काका- पाको गेन्टो कार्यमा।
रामोन ग्रोसो फाउण्डेशन रामान ग्रोसोका बच्चाहरूले उनीहरूको बुवाको सम्मानका लागि स्थापना गरेका थिए। यस संस्थाले चाड र अन्य स्थानहरूमा मानवीय कार्य गर्दछ।
मार्कोस लोरेन्टेको अनटोल्ड तथ्यहरू:
वास्तवमा #1: आफ्नो रियल म्याड्रिड ताराहरूको पारिवारिक रूख:
यसलाई थप पुष्टिकरणको आवश्यकता छैन कि मार्कोस लोरेन्टेका अभिभावकहरूको रगत "राजकुमार म्याड्रिडिस्टास "। यहाँ गेन्टो-लोलोरेन्टे-ग्रोसो परिवारमा सबै म्याड्रिडिस्टाको नामको वंशावली वृक्ष छ।
मार्कोस लोरेन्टे परिवार रूख।
वास्तवमा #2: Atletico एक पटक उहाँलाई भाडामा लिए:
यो सबै २०० 2007 मा भयो जब एटलेटिको जो एक निश्चित उमेर समूहका एकेडेमी खेलाडीहरूको छोटो थियो। क्लबले मार्कोसलाई भाडामा लिएको थियो गण्डिया प्रतियोगितामा उनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्न। १२ बर्षको उमेरको मार्कोस ल्लोरेन्टे इफे रोसेआको एकेडेमी फुटबलर थियो, उनको गृहनगर लस रोजासमा एउटा सानो क्लब। के तपाईं उसलाई तलको फोटोमा देख्न सक्नुहुन्छ?
मार्कोसले १२ वर्षको उमेरमा एटलेटिको म्याड्रिडको प्रतिनिधित्व गर्थे।
टुर्नामेन्ट पछि, मार्कोसले एटलेटिकोमा सम्मिलित हुनुको सट्टा आफ्नो परिवारको पाइला पछ्याए जसको फलस्वरूप उनलाई रियल मैड्रिड एकेडेमीमा सामेल भयो।
वास्तवमा #3: तलब ब्रेकडाउन:
एट्लिटो म्याड्रिडमा सम्मिलित भएदेखि, जिज्ञासु प्रशंसकहरूले मार्कोस लोरेन्टेको तथ्यहरूको बारेमा अनुसन्धान गर्न थाले, जस्तै उसले क्लबसँग कति कमाउँछ।
जुलाई २०१ In मा, मार्कोस लोरेन्टेले एटलेटिको म्याड्रिडसँग एउटा सम्झौतामा मोहर लगाए जसले एक जनाले उनलाई वरिपरि तलबको तलबमा देखेको थियो। Year २,१०,००० प्रति वर्ष। मार्कोस लोरेन्टेको तलब (२०१ st तथ्याats्क) सानो संख्यामा तोड्दै हामीसँग निम्न छ;
पाउन्ड स्टर्लिंग्स (£) मा आय
संयुक्त राज्य अमेरिका डलर मा आय ($)
प्रति वर्ष आय € 2,100,000 £ 1,970,430 $ 2,286,312
प्रति महिना आय € 175,000 £ 164,202.5 $ 190,526
प्रति हप्ता आय € 43,750 £ 41,051 $ 47,631
प्रति दिन आय € 6,250 £ 5,864 $ 6,804.5
प्रति घण्टा आय € 260 £ 244 $ 283.5
प्रति मिनेट आय € 4.3 £ 4.07 $ 4.7
प्रति सेकेन्ड कमाई € 0.07 £ 0.06 $ 0.08
जब देखि तपाइँ हेर्न शुरू गर्नुभयो मार्सोस लेलरेनबायो, यो उसले कमाएको हो।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… स्पेन मा औसत मानिस जो कमाउँछ € 1.889 यूरो एक महिना कम्तिमा 7.7..XNUMX वर्ष कमाउन को लागी काम गर्नु पर्छ € 175,000 जुन मार्कोस १ महिनामा कमाउँछ।
वास्तवमा #4: मार्सोस लेलरेनट्याटूहरू:
आफ्नो रगतमा आफ्नो परिवारको विरासत हुनु स्पेनिश फुटबलरको लागि मात्र पर्याप्त छ। मार्कोस, तल अवलोकन गरिए जस्तै, के भनिमा विश्वास गर्दैनन् "ट्याटु संस्कृति“। उसले संसारलाई शरीरको रेखाचित्र हेर्नको सट्टा आफ्नो तल्लो शरीरमा शिराहरू प्रदर्शन गर्दछ।
मार्कोस लोरेन्टेले अलौकिक शिरा पाए र लेख्ने समयमा ट्याटुहरूमा विश्वास गर्दैनन्
वास्तवमा #5: मार्सोस लेलरेनको धर्म:
तथ्य यो छ कि उसको परिवारका केहि सदस्यहरू (विस्तारित सहित) सहन गर्छन् इसाई नामहरूले मार्कोस लोरेन्टेका आमाबाबुले उनलाई इसाई धर्म अनुरुप हुर्काएको सम्भावनालाई विश्वास गर्ने धेरै कारण दिन्छ। तपाईको विश्वासका सवालहरुमा पनि उनीहरुको बोयरि low कम छ, हाम्रो असमानता मार्कोस क्रिष्टियनको पक्षमा छ।
पुरा नाम: मार्कोस लोरेन्टे मोरेनो।
जन्म मिति: 30 जनवरी 1995।
उमेर: (मार्च २०२० मा २ 25)
व्यवसाय: फुटबलर (मिडफिल्डर)।
अभिभावक: मारिया एन्जलस मोरेनो (आमा), पाको ललोरेन्टे (फादर)।
मातृ हजुरआमा रमन ग्रोसो
पैतृक हजुरबा हजुरआमा: एन्टोनिया जेन्को र जोस लोरेन्टे।
सुपर ग्रान्ड अंकलहरू: पाको गेन्टो, जुलियो गेन्टो,
र एन्टोनियो गेन्टो
काका: जो लोरेन्टे, टोनिन लोरेन्टे र जुलियो ल्लोरेन्टे।
Siblings: कुनै पनि
उचाइ: 1.84 मीटर (6 फुट0मा)
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो मार्कोस लोरेन्टे बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यांकहरू पढ्नका लागि धन्यबाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाइँले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।